Naing BSell | Item - PIATEN နှုတ်ခ​မ်း​ပေါင်းကပ်​ခွာ
KK Online Shop
PILATEN Lip Mask (နှုတ်​ခမ်း​ပေါင်းတင်​ကပ်​ခွာ)
Price-3000 (6 ခု ပါဝင်​ပါတယ်​ရှင်)
နှုတ်​ခမ်းညိုသူ၊ နှုတ်​ခမ်းမဲသူ၊ နှုတ်​ခမ်းခဏခဏ​ခြောက်​သူများအတွက်​ အရမ်းကိုသင့်​​တော်​တဲ့ lip mask ​လေးပါ​နော်​။ ဒါမှမဟုတ်​ နှုတ်​ခမ်းသား​လေးကို အမြဲတမ်း ပန်းနု​ရောင်​သန်းချင်​​နေရင်​​လည်း ဒီ mask ​လေးကိုပဲ အသုံးပြုလိုက်​ပါ​နော်​။
Lip mask ​လေးကို အသုံးပြု​ပေးခြင်းအားဖြင့်​ ရရှိလာမယ့်​အကျိုး​ကျေးဇူး​တွေက​တော့-
၁. နှုတ်ခမ်းသားကို ပန်းနု​ရောင်​သန်း​စေပါတယ်​။
၃. နှုတ်​ခမ်းသားကို​ရေဓာတ်​ဖြည့်​​ပေးလို့ အမြဲတမ်းစိုပြည်​​စေပါတယ်​။
၄. ​ကော်​လဂျင်​ပါဝင်​လို့ မဲညစ်​​နေတဲ့ မူလနှုတ်​ခမ်းသားအ​ရောင်​ကိုလည်း ပန်းနု​ရောင်​သန်းလာ​စေပါတယ်​။
၅. ခရမ်းလွန်​​ရောင်​ခြည်​​ကြောင့်​ နှုတ်​ခမ်းသား မဲခြင်း၊ ကွဲခြင်း၊ ​ခြောက်​ခြင်း များကိုလည်း အထိ​ရောက်​ဆုံးကာကွယ်​​ပေးပါတယ်။
lip mask ​လေးကို၁ယူပြီး နှုတ်​ခမ်း​ပေါ် နာရီဝက်​​လောက်​ တင်​ထား​ပေးရပါမယ်​ရှင်​။
တစ်​ပတ်​ကို ၂ကြိမ်​ မှ ၃ ကြိမ်​ ပြုလုပ်​​ပေးရုံဖြင့်​ တင်းရင်းစို​ပြေပြီး ဆွဲ​ဆောင်​မှုရှိတဲ့ ပန်းနု​ရောင်​နှုတ်​ခမ်းသား​လေးကို ပျို​မေတို့ ပိုင်​ဆိုင်​ရမှာပါရှင်​။
09787204788ကိုလည်း SMS ပေးပို့ကာ မှာယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။